Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday Ee Farmaajo Oo Caawa Qiil Keensaday – Great Banaadir
Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday Ee Farmaajo Oo Caawa Qiil Keensaday
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) oo si rasmi ahaan u ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa iyo 8dii Febraayo ee Sannadkan 2021da, kadibna sameystay 12dii Abriilo Muddo Kororsi Labo Sanno ah oo laga soo horjeestay, ayaa wuxuu Caawa toos ula hadlay guud ahaan Dad Weynaha Soomaaliya.
“Waxaan Maalinta Sabtida ah hortatagi doonaa Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, si Dalka dib loogu soo celiyo Hannaankii Doorasho ee ay Heshiiska ku wada gaareen Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada,” ayuu yiri Farmaajo.
Xaqiiqdii, waxaa laga sugayay inuu ka dhawaajiyo in Muddo Kororsigii Labada Sanno aheyd ee la sameeyay 12dii Abriilo, in ay aheyd Xeer Ka Boodo. Ha yeeshee, wuxuu keensaday Qiil, kaasi oo noqday in Maalinta Sabtida ah uu hortagi doono Golaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Weydiinta waxey tahay: muxuu noqon doonaa Qiilka xego ee uu keensan doono Maalinta Sabtida ah oo Bishan Maajo tahay 1da ee Sannadkan 2021da?
Hubaal waxaa ah in Maalinta Sabtida ah oo ku beegan Maalinta Shaqaalaha Aduunka ee 1da Maajo ee Sannadkan 2021da, in uu Qiil ka dhigin doono si lamid ah Qiilkii 12dii Abriilo ee ku beegneyd Maalintii Ciidamada Xoogga Dalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa wararka caalamka, gaar ahaana Wararka Dalka Soomaaliya; siiba Gobolkii Banaaddir: Shabeellaha Hoose, Muqdisho iyo Shabeellaha Dhexe.